France inopa mitemo mitsva yekufambisa kune vashanyi vekuBritain
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » France Kuputsa Nhau » France inopa mitemo mitsva yekufambisa kune vashanyi vekuBritain
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • France Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Rail Kufamba • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UK Kuputsa Nhau
France iri kurerutsa zvirambidzo zvekoronavirus zvakaunzwa muna Zvita 18, zvichidzikamisa zvese zvisina kukosha kufamba pakati penyika mbiri idzi pakati pekutya kupararira kweiyo Omicron musiyano.
Vakabaiwa vaenzi vanofamba kubva ku United Kingdom kuenda kuFrance hakuchada kupa chikonzero chinogoneka chekupinda munyika kana kugara wega kana vasvika.
Sekureva kwegurukota rezvekushanya kweFrance, Jean-Baptiste Lemoyne, mhedzisiro yeCOVID-19 bvunzo yakatorwa maawa makumi maviri nemana isati yasimuka. Great Britain zvicharamba zvichidikanwa.
Vafambi vasina kubayiswa kubva ku UK zvakadaro zvicharamba zvichidikanwa kuratidza rwendo rwavo rwakakosha uye kuzviparadzanisa nevamwe kwemazuva gumi.
France iri kurerutsa zvirambidzo zvekoronavirus zvakaunzwa muna Zvita 18, zvichidzikamisa zvese zvisina kukosha kufamba pakati penyika mbiri pakati pekutya kupararira kweiyo nyika. omicron zvakasiyana.
Kubvumidza kupinda kwevashanyi kubva Great Britain ichapa kusimudzira kwakakosha kuchikamu chekushanya kweFrance panguva yezororo rechikoro raFebruary kuUK.
Vachitaura mutongo uyu, Brittany Ferries Chief Executive Christophe Mathieu akadana kuti "zororo guru" uye akati anotarisira kuti mitemo yapfuura inomiririra "kuvharwa kwekupedzisira kweCCIDID-19 dambudziko."
Kudzoreredzwa kwezvirambidzo kunouya kunyangwe France pachayo yakanyoresa huwandu hwehutachiona hutsva hwemazuva ese neChitatu, paine mazana matatu nemakumi matatu nesere, mazana masere nemakumi masere emakumi masere emhosva dzakasimbiswa, sekureva kweWorld Health Organisation (WHO).
Paramende yeFrance parizvino iri mushishi yekuunza Covid-19 pass iyo inogona kurambidza vanhu vasina kubayiwa muhupenyu hweveruzhinji. Izvi zvakakonzera kuratidzira kwakapararira munyika mukupera kwesvondo kwakaona vanhu vanopfuura zviuru zana vachibuda kuzopikisa matanho matsva aya. Bhiri iri rakapasiswa nedare repasi uye rinofanirwa kuwana rutsigiro kubva kuseneti risati ratanga kushanda zviri pamutemo.